कुन रोग भएकोले कस्तो खान खाने ? सबैले एकपटक पढनुस् – Rastriyapatrika
कुन रोग भएकोले कस्तो खान खाने ? सबैले एकपटक पढनुस्
ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल
चाडपर्व तथा गेटटुगेदरहरूमा मासुलगायत अरु थुप्रै चिल्ला, पिरा तथा मसालेदार खानेकुरा खाइन्छ । नातेदार तथा साथीभाइ भेटघाट हुँदा मासुका साथै अन्य विभिन्न परिकार बनाएर खाने चलन छ । अहिले धेरै मानिस बदलिँदो जीवनशैली तथा अव्यवस्थित खानपानका कारण रोगी हुने गरेका छन् । चाडपर्व मनाउने तथा विभिन्न गेटटुगेदर गर्ने बहानामा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरी जथाभावी खाए स्वास्थ्यमा असर पर्ने निश्चित छ ।
अहिले धेरै नेपाली ग्यािस्ट्रकबाट पीडित छन् । लामो समयसम्म भोकै बस्दा यसले अझ विकराल रूप लिन्छ । भोकै बसेर लामो समयपछि चिल्लो, पिरो, मसालेदार खाने कुरा खाए पेट दुख्न सक्छ । त्यसैले समय–समयमा पानी पिउनुका साथै फलफूल पनि खाइरहनुपर्छ । ग्यािस्ट्रकका बिरामीले बोसोयुक्त रातो मासु खानु हानिकारक हुन्छ । रातो मासुको साटो कुखुरा तथा माछा खान सकिन्छ । ग्यास्ट्रिक पीडितहरूले तारेका खानेकुरा भन्दा पनि उसिनेका तथा बेकगरिएका खानेकुरा खानु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्य खानेकुराको तुलनामा मासु खाँदा कब्जियतको समस्या सिर्जना हुन्छ । यो समस्याबाट जोगिन मासु–भातका साथमा हरियो सागपात, सलाद, खोस्टे मुंगको दाल एवं फलफूल आदि रेसायुक्त खानेकुरा पनि उत्तिकै खानुपर्छ भने पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ ।
अहिले धेरै मानिस मधुमेहका रोगी छन् । मधुमेहका रोगीले गुलियो नहालेको खानेकुरा समय–समयमा खाइरहनु आवश्यक हुन्छ । नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्छ । खाली पेटमा धेरै पिरो–अमिलो खाँदा सुगरको मात्रा वृद्धि हुन सक्छ । मधुमेहका बिरामीका लागि रातो भन्दा पनि सेतो मासु तथा माछा उपयुक्त मानिन्छ । सीमित क्यालोरीयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । कतिपयले मासुसँगै ड्रिंक्स पनि गर्छन् । अल्कोहल तथा कोल्ड ड्रिंक्समा क्यालोरी शून्य हुन्छ भने त्यसले सुगर बढाउँछ । गेटटुगेदर तथा चाडपर्वमा दुई चार पिस सुगरफ्रि मिठाईं खान सकिन्छ ।
मुटु रोगीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिई चिल्लो तथा पिरो खानेकुरा बढी खाए उच्च रक्तचाप हुनुका साथै स्ट्रोकसमेत हुनसक्छ । मुटुको नसा साँघुरिएका बिरामीले रातो मासु खानुहुँदैन । धेरै क्यालोरीयुक्त, चिल्ला, पिरा, अमिला खानेकुरा बानुपर्छ । मुटुकारोगीले कुखुरा तथा माछा ग्रिल गरेर खानु उपयुक्त हुन्छ ।
धेरैलाई रातो मासु मीठो लाग्छ । युरिक एसिडका बिरामीले रातो मासु खानुहँुदैन किनभने यसमा रहने प्युरिन कन्टेन्टले युरिक एसिड बढाउँछ । दाल तथा गेडागुडी पनि सीमित मात्रामा खानुपर्छ । उच्च प्रोटिनका कारण युरिक एसिड बढ्छ परिणामस्वरूप गोली गाँठा सुुन्निन्छ । युरिक एसिड भएकाहरूले माछा खानुपर्छ भने पानी पनि प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ ।
अहिलेको बदलिँदो जीवनशैलीसँगै धेरैलाई मोटोपन (ओबेसिटी) को समस्याले सताएको छ । व्यायाम नगर्ने, धेरै गाडी चढ्ने तथा निस्क्रिय जीवनशैलीका कारण पनि यो समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । खाने–बस्ने काम मात्र गर्दा व्यायामको कमी हुन्छ । मोटोपन भएकाहरूले तारेको भन्दा पनि उसिनेको मासु खानु उपयुक्त हुन्छ । मासु मात्र धेरै नखाई सागपात पनि उत्तिकै खानुपर्छ । खाने–बस्ने मात्र नगरी कामका साथै हिँडडुल एवं शारीरिक व्यायामसमेत गर्नुपर्छ ।
दम भएकाहरूले चिल्लो, मसालेदार एवं तारेका खानेकुरा खानुहुँदैन । दमका रोगीले चिसो पेय पदार्थ तथा फ्रिजमा राखिएको खानेकुरा पनि खानुहँुदैन ।
धेरै महिलालाई रक्तअल्पताले सताउँछ । रक्तअल्पताबाट जोगिन कलेजो खानु उपयुक्त हुन्छ । कलेजोमा प्रशस्त आइरन हुन्छ । यसैगरी फलामको भाँडामा पकाइएको खानेकुरा तथा कालो दाल खाँदा पनि आइरन प्राप्त हुन्छ ।
कोलेस्ट्रोलका बिरामीले रातो मासु, कलेजो तथा फोक्सो खानु हुँदैन । गेडागुडी, कुखुराको मासु तथा माछा नतारी थोरै तेलमा बेक गरेर खानु वेश हुन्छ । हरिया तरकारी तथा सागपात प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ ।
खानेकुरा पचाउन कलेजोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले कलेजोलाई असर पार्ने खानेकुरा अल्कोहल, मासु आदि खाँदा यसका दीर्घरोगीले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । कलेजोका बिरामीले चाडपर्व, गेटटुगेदर तथा अन्य समयमा पनि बढी प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुहुँदैन ।
अहिले धेरै महिलामा थाइराइड देखिने गरेको छ । थाइराइड पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी भएको पाइन्छ । थाइराइड भएकाहरूले माछा–मासु खान सक्छन् । थाइराइड भएकाले काउली तथा बन्दाको तरकारी खानुहुँदैन भनिन्छ । नियमित सेवन गरिरहेको औषधि खानुभन्दा दुई घन्टाअघि वा पछि काउली, बन्दा तथा बदाम खान सकिन्छ । हाइपरथाइरोइडिज्ममा डायरिया हुने भएकाले रेसायुक्त खानेकुरा नखानु नै वेश हुन्छ । यस्ता बिरामीका लागि हाइ क्यालोरी डाइट उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी हाइपोथाइरोइडिज्ममा मेटाबोलिज्म स्लो हुन्छ फलस्वरूप तौल बढ्छ । त्यसैले गुलिया खानेकुरा कम खानुका साथै प्रशस्त व्यायाम गर्नुपर्छ । कम क्यालोरीयुक्त खानेकुरा तथा सलाद बढी मात्रामा खानुपर्छ ।
मिर्गौलाका बिरामीले रातो मासु, प्रोटिन तथा पोटासियमयुक्त खाना कम मात्रामा खानुपर्छ । पोटासियम बढे मुटुमा असजिलो हुन्छ भने सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता बिरामीले गेडागुडी तथा कुरिलो पनि खानुहुँदैन ।